» राजधानीमा रोपिएको रुखको कसले संरक्षण गर्ने ?
राजधानीमा रोपिएको रुखको कसले संरक्षण गर्ने ?
२०७६ असार १७,मंगलवार ०८:३३
देशको राजधानी काठमाडौंकोको सडक किनारामा रोपिएका विरुवाको संरक्षण गर्ने जिम्मा सरकारको हो । तर राजधानीलाई हरियाली बनाउने जिम्मा लिएको महानगरपालिकाले सबै विरुवा संरक्षण गर्ने जनाएको छ ।
मेयर शाक्यले कामपा र अन्य सरोकारवाला निकायको सहयोगमा विरुवा संरक्षण गर्ने योजना रहेको बताए । भने–सरकारले राजधानीमा रोपेको बिरुवा मर्न दिदैनौं, यसलाई जसरी भएपनि संरक्षण गरी देशको संघीय राजधानीलाई हरित राजधानीको रुपमा बिकास गर्नेछौ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छ ।
सालिकराम आत्महत्या प्रकरण : प्रहरी कार्यालय अगाडि होहल्ला गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिन्छौँ, – सहायक प्रजिअ पन्त
करिश्मा मानन्धरको टिप्पणी – रविका समर्थक ‘भेडाहरु’ !
निर्वाचनले नछोएको तिङ्ला, स्थानीय भन्छन्– वडाध्यक्ष भए पनि निर्वाचन होस्
पत्रकार सालिकरामकाे आत्महत्या प्रकरणमा रवि लामिछानेसहित ३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने
प्रदेश सांसद सुवेदीको पर्स लुटियो
मुख्यमन्त्री पौडेलको बोलीको ठेगान भएन…